အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ...How to learn selfstudying for IOS development??? - MYSTERY ZILLION
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ...How to learn selfstudying for IOS development???
ခုမှ IOS Developer အရမ်ြဖစ်ချင်လို့ Macbook pro နဲ့စလေ့လာနေပါတယ် စကားနည်းတယ် စကားသိပ်မပြောတတ်သော ညီလေးတစ်ယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးကျပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ
ခု Swift Programming Language ကိုလေ့လာနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ ခုထိ Project ရေးနည်း နားမလည်သေးပါဘူး
နောက်ပြီးတော့ Itunes U မှ​ာ ရှိတဲ့ Videos တွေကို ကြည့်ပြီး သင်ယူနေသော Newbie လေးဖြစ်ပါတယ် English စကားအရမ်းမကျွမ်းသောကြောင့် အတော်ဖတ်ယူနေရပါတယ် Ibooks store က swift programming စာအုပ်ကိုလည်း လေ့လာနေပါတယ်
OOP Concept ကို ဘယ်က သင်ရပါမလဲ ခင်ဗျာ
Xcode ကို အသုံးပြုနည်းက ဘယ်လို တစ်ဆင့်ချင်းဆီသင်ယူလို့ရနိုင်ပါမလဲခင်ဗျာ
ခုထိမဖြစ်လာသေးတာက သင်ထားတာတွေ အားလုံးက ဘယ်လိုတွဲအလုပ်လုပ်လာလဲဆိုတာ သေသေချာချာနားမလည်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေလို့ပါ
ဖြစ်ချင်တဲ့ Goal ကတော့ အနာဂတ်မှာ Professional ဖြစ်ဖို့ပါ
တကယ်လို့ Programming အခြေခံ မရှိသေးဘူးဆိုရင် Swift ကို စလေ့လာတာထက် OOP concept ကို ပိုင်အောင် အရင်လုပ်စေချင်တယ်။
Swift က လက်ရှိ Objective-C ထက်စာရင် အများကြီး လွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ iOS စလုပ်ကတည်းက iTunes U Stanford က နေ ပဲ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
English စာ နားမလည်တာ အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ဖူးတော့ နားလည်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ အဆင့်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် Professional အထိ သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Swift မှ မဟုတ်ပါဘူး နောက်ပိုင်း ထွက်လာမယ့် Language တွေ နောက်ပိုင်း ဆက်လေ့လာဖို့ စာအုပ်တွေ Tutorial အားလုံးက English လိုပဲ ဖတ်နိုင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် မရပေမယ့် ကြိုးစားပြီး နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ အဲဒီ အဆင့်လေး ကျော်နိုင်သွားရင် နောက်ပိုင်း တော်တော်များများကို လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Xcode အသုံးပြုနည်းလည်း Stanford က course မှာ အနည်းငယ်ပါပါတယ်။ အသုံးပြုနည်း ဆိုပြီး မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ရေးကြည့်နဲ့ သိလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တချက်က Swift က အခုလတ်တလော အမြဲတန်း update ဖြစ်နေတာကြောင့် version ပြောင်းတာ နဲ့ အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် Swift ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်
က RSS ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Xcode 6.3 မှာ Swift က 1.2 ဖြစ်သွားပါပြီ။ feature အသစ်တွေ code syntax အသစ်တွေ ထပ်ပါလာပါတယ်။
OOP concept ကို ဘယ်ကနေ သင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ UCSY (ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်) ကနေ သင်လာတာပါ။
OOP ဆိုရင် swift ထက် Java က နေ သင်တာ ပိုပြည့်စုံမယ် ထင်တယ်။
မှာ basic လေးတွေ ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။
လက်ရှိ Stanford မှာ သင်နေတဲ့ Swift က Objective-C basic concept ရှိတဲ့ သူတွေ အတွက် ပိုအဆင်ပြေတယ်။ မရှိရင်တော့ နားလည်အောင် တော်တ​ော်တော့ ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် basic swift tutorial တွေကို အရင် စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Swift Tutorial တွေကို http://www.raywenderlich.com/tutorials မှာ ကြည့်နိင်ပါတယ်။
Thanked by 1 Miracle
I am alsoabeginner like him. Thank you for suggestion Bro Saturngod.